I-Micro-Cabin Ezweni Elimangalisayo - I-Airbnb
I-Micro-Cabin Ezweni Elimangalisayo
Mansfield, South Dakota, i-United States
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Chad
Lesi sikhala siyi-trailer ye-Escape Vista enombhede wendlovukazi ophelele kanye negumbi lokugezela eligcwele. I-Heated and Air Conditioned, lokhu kuzokuvumela ukuthi uzwe ubuhle be-South Dakota Plains. Ubheke i-Salt Lake, qiniseka ukuthi awuphuthelwa ukushona kwelanga!
I-trailer ye-Vista Escape ibonwe abakhi, izingcweti, nabadwebi bezakhiwo njengendawo esebenziseka kalula, ephilayo, nejabulisayo engahlalwa kuyo. Yebo, umbhede wendlovukazi ungahlalisa umbhangqwana. Umatilasi womoya wezihambeli ezengeziwe unganikezwa ngesicelo.
4.87 · 248 okushiwo abanye
Ngithole ukuthi abahambi bomgwaqo, abavakashi, nabazingeli abavela kuwo wonke amagumbi e-48 ephansi bakujabulele ngempela ukuba sodwa kwendlwana. Imigwaqo eholela ekhabetheni imakwe kahle futhi ifinyeleleka ngazo zonke izinhlobo zezimoto. Kuyamangaza ukuthi "kuthule" kanjani, uze ubone ukuthi akuthulile nhlobo! Ukukhala kwenkomo, ukukhala kwephiasant, ukutshiyoza kwekhilikithi, nomsindo wokuqalisa ugandaganda oseduze konke kukunikeza ingoma ongeke uyithole noma kuphi! Ipulazi lomndeni wami liqhele ngamamayela angu-3/4, futhi othile uvame ukuba khona uma kuphakama isidingo!
Kuncane noma okuningi ngendlela ofisa ngayo, indawo ingeyakho ngokuphelele ukuze ujabulele noma kanjani oyifunayo. Kulabo abangazange bafundiswe ngokuphila kwasemaphandleni, ukuvakasha kwepulazi eliqhele ngekhilomitha ukusuka kukhabhinethi kungahlelwa. Izinkomo ziyoklaba futhi izimpungushe zikhala; izinyamazane ezimhlophe ziningi futhi.
Kuncane noma okuningi ngendlela ofisa ngayo, indawo ingeyakho ngokuphelele ukuze ujabulele noma kanjani oyifunayo. Kulabo abangazange bafundiswe ngokuphila kwasemaphandleni, ukuvak…